Norwegian inkampani Stokke eyaziwa emakethe imikhiqizo zezingane ukuthi sekungamashumi amaningi eminyaka futhi phakathi naleso sikhathi-ke lizimelele phakathi abaholi ekukhiqizeni eliphezulu, esiwusizo futhi stylish ingane izesekeli. Phakathi imikhiqizo ngaphansi brand "Stokke" - strollers, cribs, amatafula kokushintsha, izihlalo okusezingeni eliphezulu, isitoreji amakhabethe baby zosizo, izihlalo imoto, izindwangu ekhethekile. Ukusungulwa kanye nokusetshenziswa yokuthi kunemisebenzi emisha yokuthuthukisa kanye nochwepheshe entsha "Stokke" kuqala kunazo zonke sinake izithakazelo kanye nezidingo ingane eminyakeni yokuqala wokuphila, iqiniso lokuthi wayengumuntu lihlale kahle ngangokunokwenzeka, ephephile futhi zikhululekile. "Stokke" - eliphezulu strollers, okuyinto zihlukaniswa yizinhlobonhlobo, ukusebenziseka, Ergonomics kanye ukuklanywa futhi imishini ephelele kakhulu, kuhlanganise izakhi hhayi kuphela eyisisekelo, kodwa futhi izesekeli zonke izikhathi.
Strollers Stokke: iyini imfihlo Luhambo zabo?
Eminyakeni yokuqala yokuphila kwengane yakho izonethezeka ngempela futhi avikelwe, kuphela lapho umama nobaba, lapho ephambi njalo contact ezibukwayo futhi ethintekayo nabantu abaseduze. Ngu inkampani "Stokke" strollers (njengoba kungekho nangezinye izindlela zokuthutha abantu izingane) onganelisa lokhu kudingeka afike ekugcineni.
I chassis is ehlukile okwenyanga, ngokuthi Xplory, - ukuthuthukiswa nokuphathelene ngu Stokke. Kuyinto eksisi eyinhloko amandla okusezingeni eliphezulu aluminium ingxubevange, lapho benzelwe bonke kwezinye izingxenye (amasondo, ukuyothenga kwesitsha, noma iyunithi imbeleko esihlalweni efanele, handholds) lapho ukuhambisa up and down kwesihlalo noma carrycot. Yakhiwe ngu- "Stokke" strollers avumele ingane ukuba phezulu ngokwanele ngaphezu komhlabathi, wandise ukubonakala, futhi wenze kwemehlo nabazali babo le isikhathi eside kunazo zonke.
Namakalishi ukuvakasha block "Stokke" kuklanyelwe ukwakha imvelo ukhululekile kakhulu ingane nge skeleton yayo namanje nje abasafufusa:
- esihlalweni emuva ine ukuma yokwakheka, futhi kungase kubhekwe ukusebenza kwezikole zokusoka abasezikhundleni eziningana, kuye ngokuthi angle ukuthambekela;
- the kakhulu esihlalweni ukujula, ukujula esihlalweni kungase kushintshwe kuye ngezidingo ngazinye yengane ngayinye;
- i-surface yangaphakathi sebeqedile ukuhamba yemvelo block terry enamathela okuyinto kumjabulisa kakhulu emzimbeni, kanye nganoma isiphi isikhathi sonyaka kwenza isikhathi eside ukugcina indawo ifudumele ngaphakathi;
- Five-iphuzu ukuphepha amabhande nge ezizibeni ezithambile ukuqinisekisa ukuphepha ephelele ingane yakho;
- izici eziningana ezinjengolwazi hood ngci futhi ilanga isisitho selanga endlini kanye nekhava ahamba ngezinyawo, ohlelweni ukupholisa iyoba usizo kakhulu lapho kungene ngasiphi isikhathi sonyaka.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo "Stokke", kwakhiwa intengo okuyinto hhayi kuphela ngesisekelo ukutholakala izakhi eziyisisekelo, kodwa futhi kuncike khona e isethi ephelele izesekeli, ezokuthutha lokhu izingane 'ngoba zonke izikhathi. Bag for umama, isikhwama travel for izesekeli, isambulela, wangiphica Baby Soft, imvilophi umnikazi efudumele, noboya Muff umama - zonke lezi zinto ziwusizo ezimele wena uma uthenga stroller Stokke.
Kafushane, uthola nje kuphela izindlela zokuhamba ngoba umntwana neminyaka yokuqala yokuphila, kodwa futhi accessory stylish. Aqine "Stokke" stroller, izithombe ezingafaneleki okusesihlokweni esithi, lena ukuthengwa kakhulu wena kanye nengane yakho!